Archive du 20191002
Kandidan’ny Tim ao Morombe Iharan’ny antsojay sy fampihorohoroana sahady
Anisan’ny miaro ny ombin’ny mponina tsy horobain’ny dahalo ny kandidà Tim, ao amin’ny kaominina Ambahikily, distrikan’i Morombe, faritra Andrôy, Atoa Mahatratry Jean.
Fanendrena governora “Manaraka fotsiny ny efa nataon’ny teo aloha ny fitondrana”
ny andininy faha-325 amin’ny lalàna lah 2014-020 ny 27 septambra 2014 no ampiharina dia ny lehiben’ny Faritra no mitana ny anjara andraikitry ny mpanatanteraka eny anivon’ny Faritra ary « governora » no iantsoana azy ankehitriny, araka ny nambaran`i Rina Ranaivo-Harisoa, mpahay lalàna sady mpandinika ara-politika.
Diplomasia Malagasy Any amin’ny praiminisitra Ntsay ny baolina
Tontosa omaly talata 1 oktobra 2019 teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ny fifamindram-pitantanana teo amin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha Atoa Naina Andriantsitohaina,
Fandraisan’andraikitry ny vehivavy Mihemotra i Madagasikara
Mampanahy ny zava-misy ankehitriny ary hiteraka tsy fampandrosoana ho an’ny firenena hatrany raha ny fanendrena tompon’andraikitra tato ho ato no jerena,
Hambom-po diso toerana !
Samy milaza ho tia tanindrazana ny mpanao politika eto Madagasikara. Mambabo ny olona amin’ny fametrahana ho laharampahamehana ny tombontsoa iraisana rehefa propagandy tahaka izao.
Ankazobe Mpianaka no indray matin’ny pesta
Namono olona indray ny aretina pesta atoditariana tany Fiadanana Ankazobe.
Ankasina 67 Ha Rongony mitentina 2 tapitrisa ariary no tratra
Avy any amin’ny faritra Atsimo ireo rongony mitentina 2.000.000 Ariary izay tratra teny 67 ha. Lehilahy telo no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny STUP Anosy, ny 27 septambra lasa teo, teny Ankasina, tamin’ny resaka trafikana rongony.
Tsy fandriampahalemana Hamoaka antontan’isa ny polisy sy ny INSTAT
Andrasana ny vaovao mari-pototra izay voasokajy araka ny toerana sy ny vanim-potoana eto Madagasikara. Omaly 1 oktobra no nanatanterahana ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana teo amin’ny INSTAT sy ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka